Ny zavatra nianarantsika momba ny fahazoana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fikororohana ny fefy | Martech Zone
Ny zavatra nianarantsika momba ny fahazoana ny mpanjifa amin'ny alalàn'ny Swinging for the Fences
Zoma, Aprily 15, 2016 Zoma, Aprily 15, 2016 Cydni Tetro
Ento mivoaka any amin'ny ballgame izahay? Eny! 3DplusMe, orinasa iray azon'ny WhiteClouds, dia nahazo fahazoan-dàlana tamin'ny MLB nandritra ny roa taona lasa, namorona traikefa 3D mifandraika sy vokatra manokana miloko 3D feno ho an'ny mpankafy ballgame. Izahay dia nanangana sy manome ny haitao izay ahafahan'ny mpanatrika MLB voafantina ao amin'ny ekipa ankafizin'izy ireo ary "tonga" mpilalao amin'ny alàlan'ny fisamborana anay hanonta sehatra. Ny mpankafy dia misafidy ny ekipany, fanamiana, anaram-bosotra, isa ary paosiny ary afaka segondra dia hitany fa mpilalao ho an'ny ekipa tiany indrindra izy ireo. Avy any izy ireo dia afaka manafatra kinova printy 3D feno izay aterina any an-tranony.
3DplusMe koa no sehatra ho an'ny traikefa fakana sary an-tsary 3D natao printy manokana. vahiny lasa kilalao ankafizin-dry zareo, mpilalao sarimihetsika, maherifo ara-panatanjahantena, lalao video na mpilalao sarimihetsika, ary maro hafa, amin'ny mpivarotra toa an'i Target, Toys R Us ary Wal-Mart.
Raha jerena ny rakitsoratray amin'ny tontolo iainana roa, nifantoka tamin'ny ary nianatra izay mahasarika sy mamadika ny mpanjifa izahay, ary mieritreritra fa azo ampiharina amin'ny ankapobeny ireo fianarana ireo, na inona na inona tontolo iainana. Ity no asehon'ny fikarohana sy ny zavatra niainantsika:
Mora mividy kokoa ny mpanjifa rehefa mamorona traikefa izay mitondra azy ireo amin'ny tantaran'ny vokatra ianao. Rehefa misy hetsika ny mpankafy dia mirotsaka am-pientanam-po amin'izany atiny izany izay mitondra ny fitondran-tenany ho an'ny traikefa vokatra.
Ao anatin'ny tontolon'ny antsinjarany mahazatra, raha sendra mandalo vokatra fotsiny ny vahiny, 15% ny mpankafy mandray anjara amin'ny traikefa 3D amin'ny fividianana antsinjarany amin'ny $ 59.00. Ny traikefa dia ahafahan'ny olona manandrana azy maimaim-poana ary mahita ny tenany ho mahery fo ankafizin'izy ireo na kilalao hafa. Ny asan'ny traikefa dia ny mitondra ny mpankafy hividy. Ireo dia isa marobe raha ampitahaina amin'ny tahan'ny fiovam-po amin'ny antsinjarany 1-2%.
Amin'ny hetsika anehoana ireo mpankafy mahatoky mifantoka dia 60% ny mpankafy mividy amin'ny ASP $ 135. Ohatra lavorary amin'io taham-panovana io dia naseho tamin'ny kianja filalaovana ny World Series, ny MLB All Star Game Fan Fest, Spring Training ary ny tontolon'ny hetsika hafa. Ireo mpankafy dia te-ho tonga ao amin'ny ekipa ary ny traikefa 3D dia manome azy ireo izany fotoana izany.
Ny fanalana lehibe amin'ny fomba fijerinay:
Ny traikefa fanovana dia mampitombo ny fiovam-po
Rehefa afaka manamboatra traikefa amin'ny vokatra ianao izay mamorona fotoana aha ary mampihetsi-po amin'ny fifandraisana ara-pihetseham-po, te-hividy ny olona. Ao amin'ny tontolon'ny varotra mahazatra, izay sarotra amin'ny fomba nentim-paharazana ny mampitombo ny fiovam-po, dia voaporofonay fa afaka mampiakatra ny salan'isa amin'ny famoronana traikefa "fialamboly" ho an'ny mpanjifa ianao. Noporofoinay koa fa rehefa eo amina hetsika toa ny World Series, All Star games, Comic-con, ary ny Super Bowl ianao dia afaka mitondra fiovam-po be amin'ny alàlan'ny traikefa maharesy lahatra.
Ny fifandraisana ara-pientanam-po no mitarika ny varotra. Ny traikefanay dia nanome torohevitra mora azon'ny mpivarotra ampiasaina amin'ny sehatra fivarotana rehetra.
Ampiasao ny loharano sy ny mpiara-miasa aminao hamoronana "traikefa fanovana" izay mifanaraka amin'ny marikao. Ireo dia mety ho hetsika ho an'ny besinimaro na fampiroboroboana akaiky kokoa ao amin'ny magazay. Ohatra, niara-niasa tamin'ny Ubisoft izahay mba hanomezana fahafaham-po ny mpankafy ho lasa "Arno" rehefa natomboka tao amin'ny Ubisoft Lounge ao amin'ny E3 (Electronic Entertainment Expo) ny Assassin Creed Unity. Izany dia nanome traikefa manokana ho an'ireo mpankafy mifamatotra amin'ny tantaran'ny trano.
Mamorona traikefa izay miorina amin'ny fiandrasana sy fientanam-po amin'ny minitra ilain'ny mpanjifa amin'ny varotra farany. Ohatra, hatramin'ny fotoana nidiran'ny mpankafy ny pavilion eo an-toerana 3DplusMe dia voasarika izy ireo. Manomboka amin'ny alàlan'ny fiantohana fa izay rehetra mandeha dia mifanaraka amin'ny tantara avy amin'ny takelaka famantarana izay manasa ny vahiny ho "Ataovy amin'ny ekipa tianao indrindra", miroso amin'ny fisafidianana tena manokana ny fizarana tsirairay ary miafara amin'ny fampisehoana farany (mozika tafiditra) ao amin'ny toetra. Ity traikefa fanovana ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny fihetseham-po tsapan'ny mpanatrika hetsika.
Manolora fitaomana tsy hay tohaina. Ny valan-javaboary fialamboly dia mahafantatra fa rehefa mampiseho ny sarin'ny vahiny tsirairay amin'ny dia malaza izy ireo ary tsy mila mividy; hisarika fihetseham-po mahery vaika ary hatao ny varotra! Amin'io marika io ihany, any amin'ny tobin'ny fitiliana ataonay, afaka manadihady maimaimpoana ny tarehin'izy ireo ny mpanjifa, ary mahita avy hatrany hoe hanao ahoana ny vokatra farany, izay manampy amin'ny fividianana incent.
Miezaha ary manatsara: Raha vantany vao manana traikefa entin'ny tantara ianao dia tsy maintsy mizaha toetra sy manatsara mba hahazoana antoka fa manamboatra dingana iray hitarika ny mpanjifa amin'ny traikefa amin'ny fomba maharesy lahatra ianao. Mila rafitra ianao izay ahafahanao mahita izay mandeha ary manohy manatsara izany dingana izany.
Ireo mpivarotra ambony dia mahalala fa ny fitondrana ny mpanjifa amin'ny lalam-tantara momba ny vokatra no fomba tsara indrindra hampiasana ny fiovam-po sy ny tsy fivadihana izay mampitombo ny varotra amin'ny farany. Rehefa te-hidona amin'ny fefy ianao dia mila miarina amin'ny ramanavy imbetsaka, mianatra avy amin'ny pitch rehetra ary amin'ny farany dia hahatratra ny hazakazaka an-trano ianao.
Tags: Fanontana 3d3dplusmemanontany ny vidin'ny antsinjaranyfitadiavana mpanjifapersonalizationvokatra manokana
Cydni dia mpandraharaha mpamokatra vokatra miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fananganana vokatra sy ny fitondrana ny fahazoana mpanjifa. Izy dia filohan'ny Retail and Chief Product Officer ao amin'ny WhiteClouds, izay nahazo 3DplusMe izay izy no CEO sy mpanorina. Niasa tamin'ny varotra teknolojia ho an'ny Disney izy ary niara-niasa tamin'ny marika sy mpivarotra lehibe indrindra eto an-tany mba hamoahana ny vokatra ao anatin'izany ny Marvel, Star Wars, MLB, MLS, Warner Brothers, Dreamworks, NFL, Disney Stores, Target, Walmart ary ny Toys R Us. Mpiara miasa ao amin'ny Mercato izy, orinasam-pitomboan'ny fitomboana, mpampianatra ho an'ny orinasa kely Goldman Sachs 10k ary mpanorina ary filohan'ny Women Tech Council. Cydni dia manana mari-pahaizana master amin'ny fitantanana orinasa sy bakalorea amin'ny siansa informatika avy ao amin'ny Brigham Young University.
Mampifanaraka ny fizarana dokambarotra nentim-paharazana-nomerika